Obama oo ka hadlay Suuriya iyo Liibya | Baydhabo Online
Madaxweyne Obama ayaa mar kale sheegay in ay ka go’antahay in si toos ah tilaabo militari xukunka looga tuuro madaxweynaha dalka Suuriya, Bashaar Al Asad aysan xalineynin colaadda wadanka Suuriya.
Madaxweyne Obama oo la hadlayay BBCda ayaa sheegay in cadaadiska caalamiga ah ee la saarayo dhamaan dhinacyada oo ay Ruushka ku jiraan ay keeni karto in ay ka wadaxaajoodaan nidaam siyaasadeed oo ku meel gaar ah.
Waxaa uu sheegay Mr. Obama in tilaabdaasi aysan adkaan dooni. Waxaa kale oo uu sheegay madaxweynuhu in la sii wadayo duqeynta ka dhanka ah Ururka Daacish ee ku sugan dalka Suuriya, taas oo barbar socota dadaaladda lagu soo afjarayo dagaalka sokeeye.
Madaxweyne Obama oo BBCda siiyay wareysi dhinacyo badan taabanaya ayaa sheegay in uu aaminsanyahay mashaakilka ka jira caalamka uu u baahan yahay xal caalami ah.
Mar uu madaxweynuhu ka hadlayay arrimaha dalka Liibya, ayaa uu sheegay in ay cid walba dan ugu jirto in dowladda shaqeyneysa dalkaasi laga yagleelo.
Waxaa uu intaa ku daray Mr. Obama in ay saameyn weyn ku yeelaneyso tilaabadaasi ololaha lagu jabinayay Ururka Daacish, sidoo kalena ay wax weyn ka tareyso sidii loola tacaamuli lahaa mudada fog qalalaasahaa soogalootiga ee saameynaya dalalka Yurub.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in uu weydiistay dhamaan xulufadiisa gobolka Bariga Dhexe in ay fursad siiyaan dowladda qarameedka lagu heshiiyay ee dalka Libaya iyagoo isticmaalaya galgalka ay ku leeyihiin maleeshiyaadka Libiya si loo go’doomiyo Ururka Daacish, looguna ogolaado kooxaha kale in ay midowbaan.